बार्षिक १४ लाख बढी तलव खाने सम्पादक युवराज घिमिरेले अन्नपूर्ण छाडे !
ARCHIVE, MEDIA » बार्षिक १४ लाख बढी तलव खाने सम्पादक युवराज घिमिरेले अन्नपूर्ण छाडे !
काठमाडौँ - बार्षिक १४ लाख बढी तलव खानेअन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका सम्पादक युवराज घिमिरेले अन्नपूर्ण पोष्टको सम्पादक पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आफुले शुक्रबारकै दिनदेखि लागू हुनेगरी अन्नपूर्ण पोष्टको सम्पादकबाट राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ ।
अवका दिनमा स्वतन्त्र लेखनमा लाग्ने बताउने उनले ३ वर्षसम्म आफू एउटै मिडियामा काम गरेकोले नयाँलाई पनि अवसर दिनुपर्ने भएकोले राजीनामा दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ३ बर्षअघि उनी अन्नपूर्ण पोष्टमा पुगेका थिए ।